मुख्यमन्त्रीको चर्पी योजनाले विपन्नको जिन्दगीमा थपियो ऋणको भारी - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 Headline2 Main News National social राजनीति मुख्यमन्त्रीको चर्पी योजनाले विपन्नको जिन्दगीमा थपियो ऋणको भारी
मुख्यमन्त्रीको चर्पी योजनाले विपन्नको जिन्दगीमा थपियो ऋणको भारी
सिरहा, १४ चैत्र । लहान–१ कि रेवती सदायको छाप्रो अगाडि शौचालय बनाउन प्रयोग हुने रिङ राखिएको छ । तीन महिना अगाडि उनले तीन हजार ऋण लिएर उक्त रिङ खरिद गरेकी हुन। अहिले उनलाई शौचालय बनाउन थप ऋणको पिरलो छ । तर, सुकुम्बासी उनलाई साहुले थप ऋण पत्याइरहेको छैन् ।
रेवती दुई छोरीसहित ऐलानी जमिनमा छाप्रो हालेर ओत लागेकी छिन् । घाम पानी छल्न हालेको छाप्रोमा बस्ने हाम्रो जिन्दगीको भर मजदुरी नै हो उनले भनिन् । पत्ती सञ्जय लहान बजारमा कुलीको काम गर्छन् । मजदुरीबाट कमाएको पैसाले दैनिक खर्च धान्नै मुस्किल छ उनलाई । सानो बच्चा छ बिरामी परिरहन्छ । उनले भनिन,‘बिरामी पर्दा उपचारमा लाग्ने खर्चका लागि पनि साहु महाजन गुहार्नुपर्छ । कारण मजदुरीको कमाई कति नै हुन्छ र दुईचार सय त हो नी उनले भनिन,‘त्यो पनि सधैँ हुन्न ।
पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीले प्रत्येक घरमा शौचालय हुनुपर्ने बताएपछि शौचालय नबनाउने लाई सुरक्षाकर्मीमार्फत पक्राउ गर्न थालेको छ । जसले यो समुदायका विपन्नको दैनिकी झन सकसपूर्ण बनाएको छ । ‘खानलाई पैसा छ शौचालय बनाउन छैन भन्दै हाकिमहरू हप्काउँछन, ‘ऋणमा जिन्दगी धान्ने हामी सुकुम्वासी लाई शौचालयले थप ऋणको बोझ बोकाइदियो । जति गर्दापनि १० हजारभन्दा घटी खर्चमा लाग्दैन उनले भनिन,‘यति धेरै पैंसाका लागि साहुमहाजनसँग ऋण नलिई धरै छैन् । उनले पीडा थपिन, ‘केही नहुने सुकुम्बासीलाई यति धेरै रकम साहुमहाजनले पनि हतपती पत्याउँदैन ।
यही टोलकी मञ्जु सदायको पीडा पनि कम्ता दर्दनाक छैन् । महिनादिन देखि उनी छिमेकको छाप्रोमा आश्रय लिएर बसेकी छिन् । सुकुम्बासी उनको ओत लाग्ने छाप्रो समान्य हावाले हल्लिएर ढल्यो । ढलेको छाप्रो ठड्याउन हम्मे परेको बेला शौचालय बनाउने पिरोले उनलाई बेचैन बनाएको छ । घामपानी छल्ने छाप्रो ठड्याउन नसकेको बेला शौचालय बनाउने रुपैयाँको जोहोले उनलाई हैरान बनाएको छ । साहुमहाजनसँग पनि कतीपटक माग्नु उनले भनिन, ‘छाप्रो बनाउन ऋण लिएकै थिएँ, शौचालयका लागि फेरि कसरी माग्नु?
सिरहा नगरपालिका पासवान टोलकी मिना पासवान ऋणको थप भारले थलिएकी छिन् । पहिलाको ऋण छँदै थियो शौचालय बनाउन थप ऋण बोक्नुपर्यो उनले भनिन,‘सुकुम्बासी हाम्रो जिन्दगी धान्ने सहारा साहुमहाजनको घरखेतमा मजदुरी हो । सधैं काम पनि पाइदैन उनले भनिन,‘तीन महिनाको मजदुरीबाट १२ महिना जिन्दगी धान्नुपर्छ । बिरामी पर्दा लाग्ने चर्को खर्चका लागि पनि साहुमहाजन गुहार्नुपर्ने हामी गरिबलाई शौचालयले थप ऋणको बोझ बोकायो, उनले भनिन् ।
सुकुम्बासी यी महिलाहरुको खुल्ला दिसामुक्त अभियानले थपेको आर्थिक भारको पीडासँगै चुलो र सुत्ने ओछ्यानसँगै टाँसिएर बनाउनुपरेको चर्पीले अत्यास थपेको छ । सुकुम्वासी उनीहरुसँग प्रायः सुत्ने छाप्रो छटाउने जमिन भन्दा बढी क्षेत्र जमिन हुन्न । छाप्रोभित्र सुत्ने र बरन्डामा भान्सा गर्ने प्रायःसुकुम्बासीहरुलाई भान्सा(चुलो) टसाएरै चर्पी बनाउन लगाइएको छ । चुलो र चर्पीसँगै हुँदा उनीहरुको दैनिकी सकसपूर्ण बनेको छ । एकातिर साहुमहाजनसँग लिएको ऋृणको भारी त्यसमाथि चुलो टसाएर बनाएको चर्पीमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरु पिरोलिएका छन् ।
हाम्रो सुकुम्वासी बस्तीमा सामुदायीक शौचालय बनाइदिएको भए हुन्थ्यो धनगडीमाई नगरपालिका ३ हनुमाननगरकी सुकनी सदायको धारणा छ । दिनदिनै प्रहरीबाट पक्राउ खाएर हजारहजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु भन्दा ऋणै लिएर पनि शौचालय बनाउने उनले निधो गरिन। सुकुम्बासी उनलाई छाप्रो पछाडिको जग्गाधनीले चर्पीका लागि खाल्डो नै खन्न दिएनन् । उनीसँग एउटै विकल्प छ सुत्न बनाएको साँघुरो छाप्रोभित्र चर्पी बनाउनु । उनले पीडा पोखिन,‘सुत्ने ठाउँमा कसरी चर्पी बनाउनु ।
चुलोसँगै टसाएर चर्पी बनाउन लगाएपनि प्रयोग नगर्ने विपन्नहरूको एउटै प्रश्न छ बाहिर दिसा गरे रोग फैलिन्छ भन्ने हाकिमले चुलोसँग जोडेर चर्पी बनाउन लगाउनु स्वास्थ्यमैत्री हो ?
#Breaking #Headline1 #Headline2 #Main News #National #social #राजनीति